बलिउड / हलिउड Archives - Page 20 of 36 - Purbeli News
रिलिज भएको ४ दिनमै ‘गोलमाल अगेन’ले कायम गर्याे नयाँ रेकर्ड
अजय देगवन अभिनित चलभित्र ‘गोलमाल अगेन' ले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । रिलिज भएको ४ दिनमै १०० करोड भन्दा भन्दा माथिकाे व्यपार गर्न सफल भएकाे छ । चलचित्रले पहिलो दिन ३० करोड क्रमस २९ करोड, २८ करोड, ३० कराेडकाे व्यपार गर्न सफल भएकाे छ । अक्टोवर २० बाट रिलिज भएकाे उक्त चलचित्रमा अजय देगवन, जोनी लिभर, अरसद वारसी, परिणीति चोपडा, तब्बू, तुषार कपूर, ...
काठमाण्डाैमा सुटिङ भएकाे हलिउड चलचित्र एक्सा रिलिज
काठमाण्डाै । काठमाण्डाैकाे बिभिन्न स्थानमा सुटिङ भएकाे हलिउड चलचित्र एक्सा रिलिज भएकाे छ । गत २०७२ बैशाख १२ गते नेपालमा गएकाे बिनासकारी भुकम्पकाे बेला उद्धारकालागि खटीएका भाेलेन्टियर्सकाे बिषयमा अाधरीत चलचित्र नेपालकाे काठमाण्डाै , लगायत फ्रान्स र थाइल्यान्ण्डमा पनि सुटिङ भएकाे थियाे । हलीउडकी प्रशिद्ध माेडल जुली डुबलकाे मुख्य भुमिका रहेकाे उक्त ...
प्रभासको ‘साहो’को फर्स्ट लुक सार्वजनिक, प्रभाससँगै श्रद्धा कपुर देखिदै
काठमाडौं / सुपरस्टार प्रभासको नयाँ फिल्म ‘साहो’ को फर्स्ट लुक सार्वजनिक भएको छ । प्रभासको ३८ औं जन्मदिनको अवसरमा फिल्मको पोस्टर रिलिज गरिएको हो । २०१७ को ब्लकबस्टर फिल्म ‘बाहुबली–द कनक्लुजन’ मा बाहुबलीको भूमिका निभाएका प्रभासको ‘साहो’ मा फरकरुपमा देखा पर्नेछन् । उनले फस्ट लुक आफनो अफियीसियल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्दे जन्मदिनमा शुभकामना दिने सबै ...
लुज ब्रामा उनका भित्री अंग छर्लंगै !
किमको तडकभडक: भड्किला पोसाक लगाएर कसरी समाचारमा छाउने भनेर किम कार्दिसनलाई सोध्दा हुन्छ । उनको विगत पल्टाउने जोकोहीले यसबारे स्पष्ट हुन सक्छ । हलिउडकी बमसेल मोडेल तथा अभिनेत्री उनै किम केही दिन अघि ग्यास स्टेसन र अन्य ठाउँको परिक्रमा गर्दा भित्री वस्त्रबिना प्रस्तुत भएकी थिइन् । उनको भड्किलो अवतारसँगै धेरै पापाराजीहरुका आँखा ठूला भएका थिए । काल...
केआरकेले आमिर खानबारे के भने त्यस्तो ? ट्वीटरले ब्लक गरिदियो अकाउन्ट
आमिर खान र उनको फिल्मबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नु कमाल राशिद खान उर्फ केआरकेका लागि यति भारी पर्यो कि ट्वीटरले उनको अकाउन्ट नै ब्लक गरिदियो । वास्तवमा केआरकेले बिहिबार रिलिज भएको आमिर खानको फिल्म ‘सिक्रेट सुपरस्टारबारे तीन ट्वीट गरे जसमा उनले आमिरले उनलाई र उनीजस्तै अन्य पिताहरुलाई फिल्ममा गलत तरिकाले पेश गरेका छन् । ‘सिक्रेट सुपरस्टार’ को क...
यसकारण सलमानसँग फिल्म खेल्न मानेनन् अमिताभ
एजेन्सी / हिन्दी चलचित्र 'रेस ३' सलमान खानसँग अभिनय गर्न अमिताभ बच्चनले अस्वीकार गरेका छन् । रेमो डिजुजाको निर्देशनमा बन्न लागेको साे चलचित्रमा अमिताभको यो निर्णयपछि सलमान ऐश्वर्याको सम्बन्धलगायत अनेकन अड्कलबाजी गरिए पनि ती चर्चाहरू वाइयात भएको निर्देशक रेमोले स्पष्ट पारेका छन् । सलमान र ज्याकलिनको जोडी पक्का भइसकेको यो चलचित्र र अमिताभ अभिनीत ...
छोरीका कारण तनावमा शाहरुख खान, कारण यस्तो
बलिउड स्टार साहरुख खान अहिले छोरी सुहानाका कारण तनावमा छन् । छोरीको स्विमिङ पूलको तस्बिर सामाजिक संजालमा एकाएक भार्इरल भएसँगै शाहरुख तनावमा रहेका हुन् । सामाजिक संजालमा भाइरल भएसंगै भारतका विभिन्न मिडियाहरूमा छाए संगै साहरुखले केही मिडियामा फोन नै गरेर तस्बिर हटाइदिन आग्रह गरेका थिए । साहरुख सुहानाको यस्तो तस्बिर भाइरल भएकोमा खुशी छैनन् ...
बिहे गरेको एक वर्ष नबित्दै रेखाका श्रीमान्‌ले गरेका थिए आत्महत्या, को थिए उनका श्रीमान् ?
मुम्बई / बलिउड चर्चित अभिनेत्री रेखा उमेरले ६३ वर्षकी भइन् । उनले १० अक्टोबरका दिन आफ्नो जन्मदिन मनाएकी छन् । आफ्नो रूप र अभिनयका कारण सदाबहार नायिकाको छबि बनाएकी रेखालाई धेरैले अविवाहित नै भएको ठान्छन् । कहिले अमिताभ बच्चन त कहिले मिथुन चक्रवर्ती त कहिले अक्षय कुमारसँग रेखाको सम्बन्ध जोडिँदै आउने गरेको छ । तर, रेखा विवाहित भएको र उनी पति वि...
७५ पुगे अमिताभ, अबको २ वर्षसम्म किन छैन समय?
नयाँ दिल्ली / बलिउडका महानायक तथा बिग बी उपनामले ख्याति कमाएका अमिताभ बच्चन आजबाट ७५ वर्ष पुगेका छन् । 'उमेर भनेको केवल एक संख्या हो' भन्ने उखान उनका लागि निकै सान्दर्भिक हुन्छ । किनकि साढे सात दशकको उमेर खियाइसक्दा पनि उनको जोश र सक्रियतामा कुनै कमी देखिँदैन। पछिल्लो चार दशकमा कहिले 'विजय' बनेर त कहिले 'पा' को भूमिकामा अमिताभ छाउँदै आएका छन् । ७५ ...
अमिताभको जन्मदिनमा आमिरले यस्तो उपहार दिदैछन्
एजेन्सी / ११ अक्टूबर यानि बुधबार अमिताभ बच्चनको जन्मदिन हो । अमिताभ आफ्नो ७५ औँ जन्मदिन मनाउदैछन् । अमिताभले हालै सामाजिक सञ्जालमा जन्मदिनलाई लिएर उत्तेजित नहुने सबैलाई आग्रह गरेका थिए । तर अमिताभ आफै एक्साइटेड नभए पनि बलिउड भने उनको जन्मदिनमा उत्साहित भएको छ र सो खुशीको क्षणमा आमिर खान पनि सहभागि हुदैछन। आमिर खानले जन्मदिनको यस्तो उपहार दिने योज...